Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » SKAL Rome nwere Kọmitii Executive ọhụrụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị SKAL Rome Board
Skal International bụ klọb zuru ụwa ọnụ maka ndị ọkachamara njem njem. Skal International bụ mmegharị zuru ụwa ọnụ nke na -ejikọ ndị na -ebugharị na ndị na -emegharị mkpọtụ. njem na njem njem. Ndị otu SKAL dị na Rome, Italy na-ekwupụta kọmitii isi ọhụrụ maka 2021-2023.
Skal International Club nke Rome nwere Kọmitii Executive ọhụrụ nke ahọpụtara, maka oge 2021-2023, n'oge Nzukọ a na-ahụkebe nke klọb emere na June 23rd na isi ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme, Hotel Universo na Rome.
Mgbakọ ahụ gosipụtara votu ya na ndị isi ọhụrụ were ọrụ.
Onye isi ala mbụ, PAOLO BARTOLOZZI, kọwara n'okwu ya ọrụ ndị isi oche nke ọ duziri n'ime ọnwa iri na isii gara aga.
SKAL Rome si onye bụbu president Paolo Bartolozzi kọwara ọrụ ndị Board of Directors na ọnwa 16 gara aga, na-akọwapụta ihe ịma aka ndị dị na COVID-19, na na-egosipụta usoro mgbanwe nke klọb na mkpa ya na mpaghara ya na nke mba ya.
Ahọrọ ndị nke ọzọ n’afọ 2021 ruo 2023 Luigi Sciarra dị ka onyeisi oche, Vanessa Cerrone, odeakwụkwọ; Paolo Bartolozzi, Treasurer, Tito Livio Mongelli na Fulvio Gianetti, ndị osote onye isi ala. A họpụtara Antonio Borgia na Rita Zoppolato dị ka ndị nyocha.
Enwere m obi ụtọ, na-aga n'ihu Paolo Bartolozzi na m nwee ike ịtụkwasị obi na Boardlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka ịga nke ọma nke klọb ahụ, n'agbanyeghị nsogbu mberede COVID.
Onye isi oche ọhụrụ ahụ bụ Luigi Sciarra kelere ndị niile na-aga nzukọ.
Ọ ga-abụ onye isi ala na akara nke ịga n'ihu n'ihe gbasara atụmatụ niile adịlarị, nke itinyekwu oke maka ndị otu na ọrụ klọb yana mmepe ohere ndị mepere yana ekele SKAL Europe.
N'oge Mgbakọ ahụ, emere ememe nke nnyefe nke COLLAR OF INTERNATIONAL Council of SKAL ITALIA ma bụrụ nke Antonio Percario mere na Paolo Bartolizzi.
SKAL mba ụwaAhọrọ m ndị isi ya na mbido ọnwa Jenụwarị afọ a.